» जिल्लालाई समृद्द बनाउने योजना ल्याउनेछौ : अध्यक्षका उम्मेदवार गुप्ता
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १७:१३
मकवानपुर उद्योग बाणिज्य (मउवा) संघको आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रित भएर मउवा संघको चुनावमा अध्यक्ष पदमा कृष्ण गुप्ता अग्रवाल उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनी खाद्य व्यवसायमा काम गर्दै आएको छ । उनी करिब ४० वर्षदेखि आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिदै आएको छ। उनको जन्म २०२५ सालमा भएको हो। उनले २०३८-०३९ सालबाट खाद्य व्यवसाय करिब २०- २५ हजार रुपैया बाट सुरु गरेको थियो ।
सुरुवाती व्यवसाय, जसबाट व्यवसायिक पहिचान समेत उनको बनेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । संघको यही कात्तिक ७ देखि ९ गतेसम्म हुने चुनावमा आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा घोषणा गरेको उम्मेद्वारीका विषयमा उनीसंग लोकखबर डटकमका संवाददाता रन्धिर साहले गरेको कुराकानी ।
आसन्न मउवासंघमा अध्यक्ष पदमा मेरो उमेदवारी रहेको छ । मउवासंघमा मैले पाँच वर्ष कार्यकाल बिताएको छु । यो मेरो छैठौं कार्यकालको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी हो । मैले मउवासंघमा आफ्नो अनुभवह हासिल गरेको छु। पाँचौं कार्यकालमा वर्तमान अध्यक्ष चयन भएको थियो । यो मेरो ६औं कार्यकालको सरुवात रहेको छ।
मउवा संघको निर्वाचनमा तपाइँलाई नै मत किन दिन्छ?
मउवा संघमा मेरो सहभागिता लामो समयदेखि रहेको छ। मैले आफ्नो ५ कार्यकाल मउवा संघमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेको छु। म लाई व्यवसायीहरुको समस्या बारे राम्रो सङ्ग थाह छ। मलाइ व्यवसायहरुलेनै उम्मेद्बारीमा आउनका लागि जोड दिएको छ।
५ वर्षको कार्यकालमा यहाँले व्यवसायीका लागि केके गर्नु भयो ?
उद्योग वाणीज्य संघमा मैले अनुभव हासिल गरिरहँदा व्यवसायीहरुलाई सबैभन्दा बढी समस्या भनेको वाणीज्य तर्फको व्यवसायीलाइ छ भन्ने लाग्छ । र मकवानपुर जिल्लामा आर्थिकको पनि उतिकै समस्या रहेको छ। मैले सधै व्यवसायहरुको हक हित र बिकासलाई समेतेर काम गरेको छु। व्यवसायहरुलाई परेको हरेक समस्यमा मैले सहयोग गरेको छु। विशेष गरी कर, मिक्स मास, अनुगमन र नाप तौल लगायत धेरै समस्यालाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएको छौं । हिजोको दिनमा प्यानमा व्यवसाय गर्ने तथा त्यो भन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य भ्याट दिनुपर्ने थियो । एक करोड ?पैयाँ सम्मको कारोबार गर्दा भ्याट नलाग्ने तथा प्यानमा हुने गर्छ ।
हामीले मकवानपुर जिल्लालाइ कसरी आर्थिक तरिकाले समृद्ध बनाउने बिषयमा केन्द्रित भएर योजनाहरु बनाउने छौँ । व्यवसायीहरुलाइ हुँदै आएको समस्या तथा बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएका छौं । हामो २१ कोठाको भवन छ तर ठूलो पानी परेपछि व्यवसायीहरुको सामान भिज्ने गर्दछ । त्यसलाइ निराकरण गर्नेछौँ । हामिले कर करले हैन रहरले बुझाउनु पर्छ विषयमा भन्नेमा प्रोत्साहित गर्नेछु । हाम्रो टिमलाई तपाई सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ । हाम्रो प्यानल नै हामी विजय भए्पश्चात् बोलेर हैन गरेर देखाउने छौ । हाम्रो यो योजना र उम्मेद्बारी तपाइ व्यवसायीको हकहितका लागि हो । जय व्यवसायी ।